प्रयोगशालामा पिसिआर गराउनेको भीडबाटै संक्रमण फैलिने डर :: Setopati
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, असोज १३
कोरोना परीक्षणका लागि लामबद्ध स्थानीय।
पोखरा–१४ चाउथेकी रुपा गुरुङलाई ४ दिनपछि भारत जानुछ, उनी विस्तारा एयरलायन्सकी एयर होस्टेज हुन्।
लकडाउनअघि २० दिनको छु्ट्टीमा घर फर्किएकी रुपालाई अहिले एयरलायन्सले बोलाएको छ, पिसिआर टेष्ट गर्नुपर्नेछ। लकडाउनभर एयरलायन्सको सम्पर्कमै रहेकी रुपालाई यसअघि कम्पनीले घरमै बस्न भनेको थियो।
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न थालेपछि एयरलायन्सले आफूलाई बोलाएको उनले बताइन्। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल प्रयोगशाला अगाडि टन्टलापुर घाममा लाइन बसेर पिसिआर गराउन गएकी रुपाले रिपोर्ट आउने वित्तिकै आफू भारत जाने बताइन्।
प्रयोगशाला भवनको अगाडि रहेको खाली चौरमा पैसा तिरेर पिसिआर परीक्षण गराउनेको दिनहुँ भीड बढ्न थालेको छ।शनिबार र आइतबार झण्डै ४ सय जनाको स्वाब संकलन गरेको प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. मोनी सुवेदीले बताइन्। मंगलबार मात्र २ सय जनाको स्वाब संकलन गरेको उनले जानकारी दिइन्।
पिसिआर गराउन आउनेमा मजदुर, अर्को जिल्लामा जानुपर्नेहरु र विरामीको संख्या बढी छ। यस्तै, नेपाल प्रहरीले लकडाउनअघि खुलाएको असई पदको भर्नाको शारीरिक परीक्षण असोज १२, १३, १४ र १५ गते लिँदैछ।
परीक्षणमा आउने युवालाई पनि पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य भनेको छ।
पोखरा– ३० खुदीका विप्लब खाँण ठकुरीले असई भर्नाको शारीरिक परीक्षामा सहभागी हुन पिसिआर गराउन आएको बताए।
प्रहरीले खुलाएको दरबन्दीमा भर्ना हुन अनिवार्य गरिएको पिसिआर रिपोर्ट ढिलो हुन्छ कि भन्ने उनलाई चिन्ता छ। ‘पिसिआर रिपोर्ट १५ गतेभित्र लिएर आउनु भनेको छ’, उनले भने, ‘यहाँ रिपोर्ट भने १६ गते आउनेजस्तो छ।’ अहिले अधिकाँश युवा प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि पिसिआर परीक्षण गराउन दिनहुँ लाइन बसेका छन्।
प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि मात्र होइन, निजी उद्योगमा काम गर्न पनि अहिले पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ।
पोखराको लेखनाथस्थित चोखोफन उद्योगमा काम गर्न केही दरबन्दी खुला गरिएको थियो। त्यही दरबन्दीमा काम गर्नका लागि पिसिआर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला पुगेकी छिन्, पोखरा–२६ बुढिबजारकी प्रमिला भुजेल। कम्पनीले नै पिसिआर रिपोर्ट ल्याउन भनेपछि आफू परिक्षण गर्न आएको उनले बताइन्।
पोखरामा काम गर्न आउने र जानेहरु मात्र होइन, सामान्य विरामीले पनि अहिले पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ।
पोखरा–१४ औधोगिक क्षेत्रमा किराना पसल चलाएकी कल्पना खड्कालाई २ दिनदेखि ज्वरो आयो। उनी मंगलबार परीक्षण गर्न पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुगिन्। अस्पतालले पिसिआर परिक्षण गर्न भनेपछि उनी पनि लाइनमा बसिन्।
‘बिरामी भनेपछि त झन् नजिकै पर्दैनन्’, उनले भनिन्, ‘पिसिआर नगरी केही नहुने भयो।’ पोखरामा मधेशबाट काम गर्न आउनेहरुलाई पनि अप्ठ्यारो छ। वीरगञ्जका सौकात मिया र फक्रदिन मिया १० दिनअघि नै काम गर्न पोखरा आएका थिए।
उनीहरुले वीरगञ्जमै पिसिआर परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पोखरा आएको बताए। तर पोखरा आएपछि पनि उनीहरुले सुख पाएनन्। ९ दिनसम्म बस्ने घरमै क्वारेन्टिन बस्नुपर्‍यो।
उनीहरुलाई काममा जान समुदायले रोकेको थियो। समुदायले नै कोरोना परीक्षण नगरी बाहिर ननिस्कनु भनेपछि आफूहरु पिसिआर परीक्षण गर्न आएको सौकातले बताए। पिसिआर गर्न मंगलबार स्वाब दिएका उनीहरुले रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र काममा फर्कन पाउनेछन्। उनीहरुले पोखरास्थित एक वर्कशपमा काम गर्छन्।
पैसा तिरेर पिसिआर गर्न सकिने प्रयोगशालाका रुपमा गण्डकी प्रदेशमै सरकारले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशालालाई मात्र तोकेको छ। प्रयोगशालाले अहिले एकजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा २ हजार रुपैयाँ लिन्छ।
पिसिआर गराउन लागेको शुल्कभन्दा पनि परीक्षण रिपोर्ट छिटो चाहियो भनेर माग्ने गरेको प्रयोगशाला निर्देशक डा. सुवेदीले बताइन्।
अस्पतालको प्रयोगशालामा दैनिक ८० वटा मात्र स्वाब परीक्षण गर्न सकिन्छ। जबकी पैसा तिरेर मात्र परीक्षण गर्न आउनेहरुको संख्या दैनिक २ सयदेखि ४ सय जनासम्म छन्।
महामारी फैलनुअघि अस्पतालमा ल्याइएको एचआइभी लगायत भाइरस परीक्षण गर्ने आरटी पिसिआर मेसिनबाटै कोरोना परीक्षण भइरहेको छ।
सरकारले कोरोना महामारी फैलिएपछि चीनबाट खरिद गरेर अस्पताललाई दिएको पिसिआर मेसिन काम नलागेर थन्किएको छ। पुरानो मेसिनबाट परीक्षण गर्दा रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको डा. सुवेदीले बताइन्। पुरानो मेसिन भएकै कारण प्रयोगशालामा अधिकाँश काम हातैले गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
अस्पतालको प्रयोगशालामा अझै पनि पर्याप्त जनशक्ति छैनन्। प्रयोगशालाभित्र दरबन्दीमा काम गर्ने महेश्वर तिमिल्सिना र सिर्जना देवकोटा दिनरात स्वाब परीक्षणमा खटिन्छन । कोरोना महामारीयता उनीहरुले एकदिन पनि छुट्टी नलिएको निर्देशक डा. सुवेदीले बताइन्।
उनीहरुलाई सघाउन महामारीपछि पोखरा विश्वविद्यालयले २ जना प्रयोगशाला विज्ञ खटाइदिएका छन्। सरकारले उनीहरुको विकल्पमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन।
अस्पतालको प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षण गराउनेको थामिनसक्नु भीड भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रयोगशालामा स्वाब पठाउने भनिएको थियो। आइतबार मात्र ४ सय जनाको स्वाब संकलन भएपछि २ सय वटा स्वाब उक्त प्रयोगशालमा पठाउन आग्रह गरिए पनि अहिलेसम्म नलगेको सुवेदीले बताइन्।
प्रदेशले क्षयरोग उपचार केन्द्रमा स्थापना गरेको प्रयोगशालामा एक घण्टामै ९० वटा स्वाब परिक्षण गर्न सकिन्छ। उक्त प्रयोगशालामा करारमा भर्ना भएको जनशक्ति पनि पर्याप्त छ। प्रदेशको प्रयोगशालामा मेसिन मार्फत नै धेरै काम हुने भएकाले छिटो र जोखिम पनि कम हुने डा. सुवेदीले बताइन्।
‘प्रदेशले प्रयोगशाला खोल्नुअघि सबै स्वाब यहीं परीक्षण हुन्थ्यो, अहिले पनि सहकार्य गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यहाँ संकलन भएको स्वाब प्रदेशको प्रयोगशालामा पनि परीक्षण गर्न सके रिपोर्ट छिटो दिन सकिन्थ्यो।’
यता, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले भने क्षयरोग उपचार केन्द्रमा स्थापना भएको प्रयोगशालामा प्रदेशका ११ जिल्लाबाट संकलन गरिएको स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. बिनोदबिन्दु शर्माले कन्ट्याक टेसिङका क्रममा संकलन भएको स्वाब प्रदेशको प्रयोगशालमा र पैसा तिरेर गरिने परीक्षण अस्पतालको प्रयोगशालामा पठाएको बताए।
‘अहिले पनि हामी सम्पर्कमै छौँ’, उनले भने, ‘अस्पताललाई अप्ठ्यारो परेको भए सहयोग गर्न सक्छौं।’ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा दिनहुँ पिसिआर परीक्षण गर्न आउनेको भीड बढेपछि कोरोना महामारीको संक्रमण अस्पतालबाटै फैलिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु चिन्तित छन्। प्रयोगशालाको प्राङ्गढमा सामाजिक दुरी कायम नगरी कतिपयले मास्क समेत नलगाई स्वाब परीक्षण गर्न आउने गरेका छन्।
‘यसरी आएकाहरुको कतिपयको रिपोर्ट पोजेटिभ आउँछ, उनीहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै हुँदैन’, निर्देशक डा. सुवेदीले भनिन्। पोजेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई भने प्रयोगशालाबाट फोन गरेरै रिपोर्ट लिन नआउनु भन्ने गरिएको छ। उनीहरुलाई आइसोलेसनमा लैजान स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई जानकारी दिने गरिएको उनले बताइन्।
सरकारले मातहतका प्रयोगशालाहरुलाई कोरोनाको लक्षण नदेखिएका व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ। तर कोरोना परिक्षण गर्न चाहने र संक्रमितको दर भने दिनहुँ बढिरहेको छ। ‘कि पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्‍यो’ डा. सुवेदीले भनिन्, ‘कि जहाँ पनि पिसिआर रिपोर्ट चाहिन्छ भनेर भन्नुभएन।’
अहिले काठमाडौं मात्र होइन, मुस्ताङ, म्याग्दी लगायत अन्य जिल्लामा जान चाहनेले पनि पिसिआर रिपोर्ट बनाइरहेका छन्। यस्तै विभिन्न पेशा, व्यवसाय र मजदुरी गर्न पनि पिसिआर रिपोर्ट चाहिने भनेपछि परीक्षण गराउन आउनेको संख्या बढेको प्रयोगशालाले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १३, २०७७, ०७:०२:००
ट्रकको ठक्करबाट प्रहरी हबल्दारको मृत्यु